Ny lahatsoratr'i Martha Jameson momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Martha Jameson
Raha manao varotra atiny ianao amin'ny karazany, dia tetika iray no ampiasainao. Mety tsy tetika ofisialy, nomanina na mahomby io, fa paikady kosa. Eritrereto ny fotoana, ny enti-miasa ary ny ezaka rehetra mamorona votoaty tsara. Tsy mora izy io, noho izany ilaina ny mitarika an'io atiny sarobidy io amin'ny alàlan'ny paikady mety. Ireto misy fomba dimy hanatsarana ny lalao marketing atiny. Mahaiza mandanjalanja amin'ny atin'ny loharano